အက်ဒါဖာရီနို | | Samsung
Tenemos ya algunos datos de las que se espera sean las especificaciones de este panel irrompible de Samsung. La verdad es que dejan con muy buenas sensacionesalos usuarios, y promete ser superioraGorilla Glass XNUMX. Así que será interesante ver si las marcas adoptan este sistema.
Se han sometido ya estas pantallasadiversas pruebas. Graciasaesto, se sabe que la nueva pantalla de Samsung se အမြင့် ၁.၂ မီတာအမြင့် ၂၆ ကြိမ်ကျနိုင်သည် ကချိုးသည်တိုင်အောင်။ ၁၅ နှစ်ဆက်တိုက်ပြန်လည်ကျဆင်းပြီးနောက် Gorilla Glass6ကိုခံလိုက်ရသည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောစမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဖြစ် အလွန်အမင်းအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ၁.၈ မီတာမီတာအထိကျဆင်းခြင်းကိုမခံပါ။ ဒါကြောင့် Samsung ကအခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာသူ့ရဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ခုခံမှုကိုခံနိုင်တဲ့အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်လိုက်တယ်။ သေချာပေါက်စျေးကွက်အတွက်အကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးထုတ်လုပ်နိုင်မယ့်အလောင်းအစား။
ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်သည်ဤထူးခြားချက်များပါ ၀ င်သော OLED panel တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည် ၎င်းသည်၎င်း၏အလေးချိန်ပေါ့ပါးမှုကိုလည်းထင်ရှားစေသည်။ ဒါကြောင့်ဖုန်းကြောင့်၎င်းကိုပိုမိုလေးလံစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဤအပြားများကိုအခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသို့ရောင်းချသည့်အခါစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်မရှိပါ။ မကြာခင်ဖြစ်သင့်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ Samsung ဖုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရဖွယ်ရှိသည် သင်၏နည်းပညာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဤနည်းပညာကိုအသုံးပြုပါ။ ဤကိစ်စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပြောနေရာကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုပြုလိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ၎င်းတို့သည်စမတ်ဖုန်းများတွင်သာအသုံးပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းကိုအခြားစက်ပစ္စည်းများ၌လည်းတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြိုကွဲပျက်စီးမျက်နှာပြင်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်